तपाईलाई थाहा छ सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ? | तपाईलाई थाहा छ सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ? – हिपमत
तपाईलाई थाहा छ सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?
काठमाडौं,२४ माघ: सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ ।